ကြုံရ ဆုံရ Q စင်တာ ဘဝများ (Q စင်တာမှ ဖြစ်ပျက်ပုံအစုံစုံ) – Myanmar
November 20, 2020 admin Knowledge, Life Style 0
Q စဝင်ကတည်းက ပြောရရင်ဖြင့် ငြိမ်သက်နေတဲ့ ကိုယ့် နှလုံသားကို လှူပ်ခက်အောင်လုပ်တာ Positive ဖြစ်ပီဆိုပီး ကတည်းက မကျအောင်မနဲ ထိမ်းထားတဲ့ စိတ် လူနာတင်ကား နောက်ခန်း ထဲ ထည့်ပီး ဝင်းအောင် ဝင်းအောင် မြည်လာတာဆိုရင်ဖြင့် ကွန်ဖရန့်ကောလ် ပြောနေရင်း ခွင့်ယူရတယ်
Q ဝင်တဲ့ ဝင်းထဲ ရောက်တော့ ဥသြသံ ရပ်ပီးသီချင်းဖွင့်ပေးပါတယ် ဗြဲကနဲ speaker သံကြီးနဲ့ “နင်မေ့လိုရပီလား ငါမေးတိုင်းမျက်ရည်တွေဝဲ” ! ခေါင်းငြိမ့်ပီးနင်လိမ်ပါ ” တဲ့ နောက်ကနေ ခေါင်း၃ ချက် ငြိမ့်ပေးလိုက်ပါတယ် Q စဝင်တော့လဲ စောစော အိပ်ဖို့ လုပ်ရယ် မနက် ည ကိုယ့်ကိုချေချွတ်မဲ့လူတွေက အမြဲရှိတာ သိလာရတယ်
ကုသိုလ် ဆိုတာ ယူတတ် ရင် ရတယ် တရားစခန်း ဝင်နေရသလိုပဲ ဟော ည ၁၀:၃၀ လောက်ဆို တရားသံနဲ့ အိပ်ရတယ် ဖွင့်တဲ့လူက သာ တုံးကနဲ အိပ်သွားတာ တရားနဲ့ မွေ့ ပျော်သူတွေ ကိုယ်တေလို ဆုံးအောင်နာမှအိပ်နိုင်တာ မဟုတ်ဘူး တခါတလေ ကြေးစည်သံလေးကို စည်လို့ ဟော မနက် ၄:၀၀ နာရီဆို ကြာနီကန် တရားထနာရပီလေ ကိုယ်ကနတ်ပြည်ရောက်မဲ့လူ တရားနာ အပျက်မခံနိုင်ဘူးလေ ဖွင့်တဲ့ ဒကာမကြီးတော့ မမေးနဲ့ မရှိဘူး အများတွက် ဖွင့်ပေးသွားပီး သူက အနစ်နာခံ လမ်းသွားလျောက်နေတာ
volunteer လုပ်တာ လည်း လွယ်တာ မှတ် လို့ မုဆိုးမလေး ဂင်္ဂါလို အခန်းဆက်နဲ့ အိပ်တတ်ရတယ် မနက် ၅ နာရီလောက်များထ ရှူးပေါက် ပီးပြန်အိပ်မလို့ ကြံလိုက် ဂင်္ဂါတို့ အဖွဲ့ နဲ့တွေ့လိုက် ကြည့် အခန်းဆက်တွေ လို ပဲ ဆက်သွားလိုက်တာ ၆:၃၀- ၇ နာရီ မှ ကိုယ့် အခန်းပြန်ရတာ ကြာဆို မနက် စောစော တိုင်းတဲ့ သွေးပေါင် နဲ့ အပူချိန် ကမှ တကယ်မှန်တာလေ ဘာသိလို့တုန်း ?
PPE နဲ့ volunteer တွေဆို မနက် ၄ နာရီလောက်ထဲက standby ဘယ်လို အိပ်ကြရတယ်မသိ PPE ဝတ်သူ level3တွေ ကို လျှို့ဝှက်နာမည်ပေးထားတယ် လကမ္ဘာတွေ လို့ (အဖြူရောင်ကြီးတေ အလုံ ဝတ်ထားလို့) Level2ကိုက တရုတ်မကြီးတွေလို့ပေးထားတယ် (တရုတ်သိုင်းကားထဲက လို ပွပွ အိကျီဂါဝန်ကြီး တွေ ဝတ်ထားလို့ ) သူတို့တွေဆို အမြဲ ကိုယ်တေနဲ့လာစကားပြောတာ နွေး၂ထွေး၂ ဖြစ်တယ် ထမင်းတူတူစားမရတာကလွဲရင် တကယ် စိတ်ဓါတ်မကျအောင် တန်းတူ နေပေးကြတဲ့လူတွေ
ဒါနဲ့ ကိုယ်တွေ စင်တာကြီးက ကလေးဂေဟာကြီး လို လဲ ဖြစ်နေတာကိုး qစင်တာကြီး ဘယ်လောက်ကျယ်သလဲဆို ကလေးတွေ ဆိုတာ ဆော့လိုက်ကြတာ ကစားကွင်းကြီးလိုပဲ ကိုယ်တွေ ထိုင်နေတဲ့ မျက်နှာကြီးက သူတို့ ပြေးနေတဲ့ ခြေထောက်ကို သွားစောင့်မိမှာစိုးလို့ တောင် ရှောင် ရှောင်ပေး နေရတာ Volunteer တွေ က အိမ်ထောင်ပြု ကလေးလည်း တကူးတက ယူစရာမလိုတော့ဘူး ဒီမှာထိမ်းရတာနဲ့တင်ဝနေပါပီ ကလေးတွေ မှာ အဖေ အမေတေ ပေါချက် ဆို ကလေးတယောက် သူ့အဖေရင်း နောက်ရက် Q လာဝင်တော့ ချီတာ မမှတ်မိလို့ဆို ငိုသတဲ့ အဲ့လိုတေvolunteer တွေတော်တာနော် ကလေးကို brainwash လုပ်ကြတာ
ဝင်လာတဲ့လူတွေ ဆိုတာ ပျော်တာ ပျော်တာ ကိုယ့်အမျိူးအိမ် တစ်လ ကိုးသတင်း လာသလို အထုတ်ထုတ်တွေနဲ့လာကြတာ တွန်းလှည်းနဲ့ သယ် ယူရသဗျ ပျော်ကြတာများ တခါတလေ လူပျိူ အပျိူ လှည့်သလို ၄/၅ ယောက်တန်း ကြီး လမ်းတွေ လျောက် ကြတာဗျ တရုတ်ကြီးတယောက် ရောက်လာတယ် အင်္ဂလိပ်လို တစ်စက်မှ မတတ်ဘူး ကိုယ်က တရုတ်လို နားလည်တယ်ဆိုပီး ဝိုင်းတွန်းပို့ ကြတာ ဘာဆေးပေးမှာလဲတဲ့ ဆေးမပေးဘူးဆိုတော့ ငါ့ဒီမှာပဲခေါ်ပီး အိပ်ခိုင်းတာ ဆို ဘာထူးသလဲတဲ့ သူ့ဆေးတွေ သိမ်းထားလို့ အာ့ တောင်းနေသေးတယ် အဖေ နာမည် ဖုန်းနာပတ်သေချာမေးတယ် မပြောချင်ဘူးလေ စုတ်တသက်သတ်နဲ့ သူ့ကို နာမည်ပေးထားတယ် ဝူဟန်လို့ အင်္ဂလိပ်လိုတာ မတတ်တာ ဝိုင်ဖိုင်ပက်စဝတ် ကျတောင်းသွားတယ်ဗျာ
Q ဝင်ပို့လာတဲ့ လူတွေများ များလာရင် ကိုယ်တွေ ဗျာများတော့တာပဲ ဗျာ လက်ဖက်သုတ် အကြော်စုံ ပျော့တဲ့ အချိန် လောက်ဆိုရင်တော့ ပြန်အားပါပီ သိပ်မပင်ပန်းပါဘူး အရပ်တပေ လောက်ပုသွားတယ် ခံစားရရုံပါပဲ Q Centre ကြီးကျယ်လွန်းလို့တခုခုဆို ခေါက်တုတ် ခေါက်ပြန်နဲ့ အဲကွန်းခန်းထဲ ချွေးကိုပြန်ရော အနံ့ သိပ်မရတော့ ညမှထက်ချိုးကြတာ Volunteer လုပ်ရတာ နည်ပညာ လည်းကျွမ်းရတယ်ဗျ ဖေ့ဘုတ် တင် ဗိုင်ပါ အကောင့်ဖွင့် ပို့စ်ကိုကူတင်ပေးရသေးတယ် လိုက် များအောင် ဂရု ထဲလည်းပြောင်းတင် ပေးရသေးတာ တပုံခြင်းစီရေးထားတာ ဖတ်ပြီးအားပေးပါဆိုလို့ ဖတ်ပေးရသေးတယ်
ကိုယ်တေ Happy Q centre ကမိသားစုတွေ ကို ပြန်လည် ချစ်ခင်စေ တဲ့ စင်တာပါဗျာ ဘာကြောင်လဲဆိုတသက်လုံး အိမ်မှာရန်ဖြစ်နေ ကြတဲ့ အမျိုးတွေဟာဆို ရင် ဒီစင်တာ ရောက်မှ မတ်တရားတေ ချစ်ကြတာ အခန်းချင်းကပ်နေချင်တာ တဲ့ တခြား Q စင်တာကနေ ဒီကို ခေါ်ချင် ကြရတာနဲ့ ဟင်းထမင်းက အရှန်ပယ်ပဲ ခက်တာက အနံ့ပျောက် တာနဲ့ အရသာမရတာနဲ့ လူတွေဆိုတော့ဟန်သား ဘယ်သူမှ အနံ့မရတော့ အီးပေါက်ရင်တောင် မသိကြဘူးလေ အိမ်သာ သန့်ရှင်းရေးမညီးမညူလုပ်ကြတယ် အနံ့မှ မရကြတာ (စတာပါ)
အဲ တစ်ရက်တော့ ရေဘဝဲ ကြွေးသဗျ အရှည်လိုက် လေးတေလှီးထားတာ အရောင်ကလည်း ညို မာမာလေးချက်ထား တော့ ဒါဘာဟင်းတုန်း မေးတော့ တယောက်က ရေဘဝဲ၊ တယောက်က ဝက်သားတဲ့ ၊ တယောက်ရောက်လာတယ် ဟာဒါဆိတ်သားတွေတဲ့၊ တယောက်က ထပြော “ထုတ်ထုတ် ထုတ်ထုတ်” တော့နေတယ်ဟတဲ့ နောက်ဆုံးဝင်လာတဲ့ လူ ဗူးထဲ ခေါင်းကြီးပါလာမှ ရေဘဝဲမှန်းသိပါရောလား ဟာရေဘဝဲတေ မတည့်တဲ့လူ allergy ဖြစ်မယ် ဆို ပီးထ ဖြစ်ကြရောလား ဒီမှာ ခုဆို အစားတခုခုရရင်တယောက်ထဲ စားမယ်ဆိုတာထပ် လူအများစာစဉ်းစာတယ် Volunteer လေးတွေအတွက်ရောပေါ့ ပြောမနာဆိုမနာနဲ့ ခိုင်းသမျ အကုန်လုပ် ကြတဲ့ ကလေးတွေ အရမ်းလည်းလိမ္မာကြတယ် မနက်ဆို သူ့ duty သူယူကြတယ် အပေါ်က ဟာသလေးတွေနဲ့ တလွဲလေးတွေ ကို ရီစရာအဖြစ် ပြောတာပါ
volunteer လုပ်ရတာ တကယ် ကုသိုလ်ရတာတပိုင်း သက်ကြီးရွယ်အိုတေကို ကူညီရလို့ သူတို့ဆီက မေတ္တာပြန်ရတာ အများကြီးပါ အိမ်က မိဘမေတ္တာတောင် မေ့ပါတယ် အဖေနဲ့ အမေက ဖုန်းဆက်မေးကြရတယ် ကိုယ်မဆက်မိလို့ စားစရာတွေ အသီးတွေ ဆိုလည်း volunteer တွေစားပါစေဆိုပီး ပေးတာ အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲ သူတို့ကိုမေတ္တာပေးတော့မေတ္တာပြန်ရပါတယ်
Oxford ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်း volunteer တွေကိုအားပေးပြီး မေတ္တာ ဂရုဏာ တရားထားဖို့ တရားဟောပြသပေးပီး ၄ မိနစ် မေတ္တာပို့တရားထိုင်ခိုင်းတယ် ကုသိုလ်တွေဆိုတာ တလှေကြီးကိုရကြတာ စိတ်ပါပါမပါပါလုပ်ရင်းနဲ့ကို ပျော်ပီး စိတ်ပါလက်ပါကူလုပ်ကြတာ အရင်က အပြင်ကနေ ဌာန ဆိုင်ရာက ရာထူးကြီး တေ ဝင်ဝင်ခြင်း အာဏာပြသလိုလုပ် ပြသနာရှာတတ်ပေမဲ့ ဆရာတော် ကြီး ဟောသလို “ဪဒီလူတွေ ရောဂါ ဝေတနာကြောင့် စိတ်ဖိစီးနေတယ် သူတို့ကိုယ်တိုင် manage မလုပ်နိုင်ဘူး ငါတို့ ကရုဏာထားပေးမယ်” ဆို တွေးပီး ဆက်ဆံပေးလိုက်တော့ သူတို့လည်း ပြောင်းလဲသွားတယ် လက်ပေါက်ကပ်တဲ့တရုတ်ကြီးတောင်ခုဆို ပျော်နေပီ အသီးစားချင်တာ ပို့တဲ့လူမရှိလို့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်း ပို့ပေးထားတဲ့သစ်တော်သီး ကြွေးလိုက်တယ်
PPE ဝတ်ထားတဲ့ အတွင်း Volunteer တွေဆိုရင် ကိုယ်တွေနဲ့တူတူစကားလာပြောကြ စကြ နောက်ကြနဲ့ ခုဆို မိသားစုလိုတောင်ဖြစ်နေကြပီ သူတို့ အတွက်ဂုဏ်ယူသလို သူတို့ကို ကြည့်ပြီး အမြဲသာဓုခေါ်နေရတာ အပူခံ အသက်ရှူကြပ်ခံ risk တေယူပီး လာလုပ် ပေးနေကြတာကိုမြင်ရင်ငါလည်း အဲ့လိုလုပ်ချင် တယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဖြစ်လာတယ် ငါထွက်သွားရင်လည်းသူတို့လိုပဲ ပြန်လာလုပ်မယ်ဆိုပီး တွေးမိအောင် ကို သဓ္ဓါတရား ကဖြစ်ပေါ်တာ ပါ
ဆေးရုံအုပ်ကြီးနဲ့ weloveYangon က EC အကိုတွေ ဆို PPE နဲ့နေ့တိုင်းလာပီး လူမမာတွေကိုကြည့်တာ အားပေးစကားပြောတာ ကိုယ်တွေကိုလည်းသူ့သားသမီးတွေလိုပဲ ဒီမှာလုပ်နေရလို့ စိတ်ညစ်တယ်ပင်ပန်းတယ် မရှိပဲ ပိုဂုဏ်ယူမိတယ် မမောနိုင်ပါဘူး ဒီမှာရှိနေရတဲ့ ကာလတိုင်းကို ကုသိုလ်ရအောင် နေနေပါတယ် ကာယဒါန ရော ကာလဒါနရော ခေါ်မှာပေါ့ စိတ်ရောကိုယ်ပါ ကျန်းမာအောင်လည်းနေနေပါတယ် နားကအရမ်းပါးလို့ အသံနဲနဲကြားရင်တောင်နိုးတတ်တော့ ညညအိပ်မရပါဘူး မနက်စောစော လမ်းလျောက်သံကြားရင်လည်းနိုးလာပါတယ် အစားကလည်း သိပ်မစားဖြစ်တော့သွေးပေါင် ကျတာ တခါတလေအသက်ရှုကြပ်တာ ကလွဲရင် ရန်တာအကုန်ကောင်းပါတယ်
ဒီ centre တခုလုံး က positive ဆိုတော့ အသက်ရှုကျပ်ရင် mask မတပ်ပါဘူး ခုဆို ကိုယ့်ကိုအကုန်သိနေပါပီ မနက်ဆို နေမကောင်ဘူးလား ဂရုစိုက် အစားယူပေးရမလားဆိုပီး တခြားလူမမာ အန်တီကြီးတေက ဂရုစိုက်တာ တောင်ခံရပါသေးတယ် ဆိုဖီယာနောက် ၄ ရက်လောက်ဆိုပြန်ရပါတော့မယ် ဒီ centre လေးနဲ့ ဒီကလူတွေကိုတော့ အရမ်း သတိရနေတော့မှာပါ ခုလိုကုသိုလ်ကောင်းမှူလေးတွေကိုလည်း အိမ်မှာ home Q လုပ်ပီး လို့ နားပီးရင် လာလုပ်မယ် တွေးပါတယ် Full time အလုပ်လည်းရှိနေလို့ weekend တွေလုပ်ဖို့လည်းစီစဉ်ထားပါတယ်
ခု ဆိုဖီယာရေးထားတာတွေက လူတွေကို အားကျအောင်လည်းလုပ် ရေးတာမဟုတ်ပါဘူး တကယ် တွေ့ကြုံခံစားရတဲ့ ခံစားချက်နဲ့ အတွေ့အကြုံကို မုဒိတာ ပွားရအောင် share ပေးတာပါ ဆိုဖီယာက နဂိုတည်းက ကျရာနေရာမှာပျော်တတ်တယ် အကောင်းမြင်တတ်တဲ့လူဆိုတော့ ဘယ်နေရာရောက်ရောက် အကောင်းဆုံး ကြိုးစားပီးနေသွားမယ် အကျိုးရှိအောင်နေမယ် လို့တွေးထားပါတယ် အခုအချိန်မှာ အစိုးရကော weloveyangon လို ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့စည်းတွေကရော ခုလို ပြည်သူတွေ အတွက် သိန်းထောင်ချီအကုန်ကျခံလုပ် ပေးတာတွေကို appreciate လုပ်သလို တခြားလူတွေကိုလည်း ကြံဖန် အပြစ်မမြင်ပဲ appreciate လုပ်သင့်တာလေးတွေကိုလုပ်စေချင်ပါတယ်
ဒီစင်တာမှာလူတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို ပိုသိမြင်စေပါတယ် လူတချို့ဟာတကယ်စေတနာနဲ့မထိုက်တန်ဘူးဆိုတာသိပ်မှန်ပါတယ် ကိုယ်တွေကလည်းလူမမာတွေပါပဲ စေတနာနဲ့ လုပ်နေကြတာပါ ညမတို့ဟာ လူမမာတွေလက်ခံတာ အခန်းစီစဉ်တာ ဂရုစိုက်တာ တချို့ အဖော်မပါရင် ဝေယာဝစ္စ ၊ အစားသောက်ဖို့ ရေပို့ ဆေးပို့၊ အမှိုက်သိမ်း အိမ်သာ ဆေး ကအစ အကုန်မေတ္တာ နဲ့ တာဝန်ယူ ကြရတာပါ တခါတလေ ညမတို့ ကိုယ်တိုင်လည်း လူမမာ လိုပင်ပန်းတဲ့ အခါရှိပါတယ် တချို့လူနာတွေဟာ ဆိုဖီယာတို့ volunteer တွေကိုတောင် အခကြေးငွေ နဲ့ လုပ်နေတဲ့ လူတွေလိုဆက်ဆံခံရပါတယ်
လူမမာတွေ များလာတာနဲ့ အမျှ လူပေါင်းစုံလာပါတယ် အပူချိန်တိုင်းကိရိယာတေက အစ တချို့ဆို ကိုယ့်အခန်းထဲ ယူသွားကြပါတယ် အသစ်တွေ ထည့်ပေးရပါတယ် မိုက်နဲ့အော်ရပါတယ် တခြားပစ္စည်းတွေတော့ အပျောက်အရှမရှိပါ တစ်ရှူး တေ မုန့်ထုတ်တေ ကိုလိုတာထက်ပိုယူ ကြပါတယ် ဆီးချိုတိုင်းတာတွေက အစ အိမ်မာကိုယ့်ဖာသာ ဝယ်တိုင်းရတာပါ ဒီမှာထား ပေးထားတာတွေကို နောက်ရက်တွေအတွက် ပိုယူသွားကြပါတယ် တကယ်လိုတဲ့လူ ကြတိုင်းစရာမရှိပါ Centre Management team က အဲ့လို လူတွေရှိမှန်းသိပေမဲ့လည်း စေတနာမပျက်စိတ်မပျက်ပဲ အမြဲ ဖြည့်ဆည်းပေးနေတာ မြင်ရလို့ ကိုယ်က တောင် ကြားထဲက စိတ်ဓါတ်မကောင်းတဲ့လူတွေ ကို စိတ်ပျက် တရားတာတွေ ကို လက်မခံနိုင် မကျေနပ်ဖြစ်နေမိတာကို ပြန်ဆင်ခြင်ရပါတယ် ဪသူတို့ မကောင်းတာသူတို့ကိစ္စ အကုသိုလ် စိတ်မဖြစ်အောင်နေမယ် ဆိုပီးပဲတွေးရပါတယ်
လူမမာ အချင်းချင်းကူညီတတ်တဲ့ စိတ်တော့ အများစုမှာ ရှိကြပါတယ် ဒီမှာ မနက်နေ့လည် ညစာ မုန့် လိုလေသေးမရှိ ဖန်တီးပေးထားတာတောင် သံပုရာရည် မသောက်ရလို့ ကွန်ပလိန်း တက်တဲ့လူတွေရှိပါတယ် စားစရာအဆင်သင့် ပေးထားလို့ပါ ရောဂါဝေတနာခံစားရရင် ဆေးတွေ လိုတာပေးပါတယ် ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက် မရတဲ့ဆေးတွေ မပေးပါဘူး ဒီကပေးလို့ရတဲ့ဆေးတွေ လာပို့ရင်လည်း လက်မခံပါဘူး
Covid ဖြစ်တဲ့ကာလမှာ သာမန်လို နေလို့မရပဲ ဂရုစိုက်ရမှာတွေရှိပါတယ် အဲ့ အတွက် အစပ် တွေ ဝမ်းသွား မဲ့အစားစာတွေမသယ်ခိုင်းတာပါ ကိုယ်တေလည်းမစားပါဘူး Oxygen လွှတ်ထားလို့ gas မီးခြစ်တေ ပေးမဝင်ပါဘူး ချွန်ထက်တဲ့အရာတွေ ခွင့် မပြုပါဘူး ခုကဆေးရုံတက်နေတယ် သဘောထား ဖို့ ခဏခဏ ပြောထားပါတယ် ကလေးတွေလည်း gym ဆော့တဲ့ပစ္စည်းတွေ နဲ့ တခြား ထားထားတာတွေကို ဖျက်ဆီးပြစ်ကြပါတယ် မိဘတွေကလည်း ကလေးတွေကို မကြည့်ပဲ ပြစ်ထား ကြပါတယ်
မိန်းမ ယောကျာ်း အကန့်တွေခွဲထားပါတယ် ညဖက် သွားလာခွင့်မပြုပါ အခန်းတခါးတွေမရှိလို့ပါ လာတဲ့လူတွေက အခန်းတွေ ကိုယ့်ဖာသာပြောင်းတယ် ယောကျာ်းအခန်း မိန်းမသွားနေတယ် မိန်းမအခန်း ယောကျာ်းတွေ ညဖက်ထိလာတယ် တော်တော်ကို ပြောရဆိုရပါတယ် volunteer လုပ်ရတာရော ဒီ စင်တာ ကို manage လုပ်ရတာကော တကယ်မလွယ်ပါဘူး မိသားစုတစုမှာတောင် ညှိဖို့ ထိမ်းဖို့မလွယ်တာ လူ အယောက်ပေါင်း ၆၀၀-၇၀၀ ကို ဘယ်လိုမှ ထိမ်းချုပ်လို့မရနိုင်ပါဘူး
ထွက်တဲ့လူတချို့ အခန်းထဲ အိမ်သာ တက်သွားတယ် အမှိုက်တေ ဖွသွားတယ် ခြင်ထောင်တောင်မသိမ်းသွားဘူး ကိုယ်တွေအကုန်လုပ်ရတာပါ ဘာပြောပြောပြောအကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်အောင် နေပီး လမ်းမှားရောက်နေတဲ့လူတွေကို လမ်းမှန်ရောက်ဖို့ အမှားတွေ အမှန်သိအောင်တော့ ရှိနေသမျ ကာလမှာ မေတ္တာစိတ်နဲ့ ပြောသွားမှာပါ လူတိုင်း ညမရေးထားတဲ့လူမျိုး ထဲ မှာမပါပါဘူး ဒါပေမဲ့ အနဲစု ကတော့ ရှိနေသေးပါတယ်ရှင် သူတို့ ကို လမ်းမှန်ပြဖို့ တာဝန်က ညမတို့ အားလုံးမှာရှိပါတယ်
နောက်ထက် ထပ်မှာချင်တာ ကတော့ ဒီစာကိုဖတ်ကြည့်သူတိုင်း မိမိက သတိမပြုမိပဲ အဲ့လိုလူတန်းစားဖြစ်နေခဲ့ရင်တောင် ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့နဲ့ ခုလိုစေတနာ အပြည့် မေတ္တာအပြည့်နဲ့ လုပ်ပေးတဲ့ လူတွေ အဖွဲ့အစည်းတွေ အပေါ် အခွင့်ရေး ရသလောက် မယူဖို့ မိမိရဲ့မကောင်းဘူးထင် တဲ့ စိတ်ဓါတ် တွေကို သိမြင် ပြောင်းလဲလို့ရအောင် အသေးစိတ်ရေးပေးလိုက်ရပါတယ် အားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ လူတိုင်း အကောင်းမြင်ဝါဒရှိပြီး လောက အကျိူး သယ်ပိုးသော လူများကို မေတ္တာထားတတ် နိုင် ကြပါစေ
ရှေ့တန်းက ဆရာ ဆရာမ နှင့် Volunteer များဟာလည်း ပုထုဇဉ် လူသားများ ဖြစ်သောကြောင့် အမှားမကင်းနိုင်လို့ အမှားတွေရှိရင် နားလည် ခွင့်လွှတ်ပေးစေချင်သလို Q centre ကလိုအပ်ချက်တွေရှိရင်လည်းနားလည် ပေးစေချင်ပါတယ် ဒီကာလမှာ နေရာ အစုံ ဘက်စုံက လုပ်အားပေး ကူညီနေကြသော ဆရာ/ဆရာမ များ Volunteer များကို စာနာထောက်ထားသော အနေဖြင့် အပြင်ကို မထွက်ကြပဲ မိမိကိုကိုယ် ကျန်းမာအောင် သတိဖြင့် နေထိုင်ကြပါရှင် ခုလို အတွေ့အကြုံလေးတွေရအောင် ဖန်တီးပေးတဲ့ We love Yangon အဖွဲ့ကိုရော Volunteer ကလေးတွေကိုရော အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
Sophia Phu Pwint Yee MON
မယ်လိုဒီ ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ခံစားချက်တွေကို ပြောပြလာတဲ့ မိတ်ကပ် ခင်စန်းဝင်း